विपन्नको भरोसा स्वास्थ्य बिमा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
विपन्नको भरोसा स्वास्थ्य बिमा
रुकुम पश्चिम — बाँफिकोट गाउँपालिका ५, अमिलाखोलाका कालीबहादुर विकका ७ वर्षीय छोरा यज्ञबहादुरको गत वैशाखमा घरनजिकै तुथु (किमु) को रुखबाट लडेर हात भाँचियो । घरको उब्जनीले ३ महिना खान नपुग्ने कालीबहादुरले भाँचिएको छोराको हातको उपचार गर्न सक्ने स्रोत थिएन । भारतमा मजदुरी गरी परिवार पाल्दै आएका विकमाथि ठूलै वज्रपात पर्‍यो । घाइते छोरालाई जसोतसो जिल्ला अस्पताल सल्ले पुर्‍याएका उनलाई झन् समस्या भइदियो । उपचारका लागि छोरालाई नेपालगन्ज पुर्‍याउनुपर्ने भयो । मुस्किलले जिल्ला अस्पताल पुगेका उनलाई नेपालगन्ज पुग्न र छोराको उपचारमा समस्या हुने भयो ।
छिमेकी राजेन्द्र पुरीको सहयोगमा नेपालगन्ज पुगेका विकका लागि ठूलो सहयोगी बन्यो स्वास्थ्य बिमा । जिल्ला अस्पतालले कोहलपुरस्थित शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरिदियो । त्यहाँ पुगेपछि उनको जीवनमा स्वास्थ्य बिमाले ठूलो राहत दियो । रड किन्नेबाहेक अस्पतालको सबै खर्च स्वास्थ्य बिमामार्फत भयो । बाँफिकोट गाउँपालिकाले अति विपन्नको हैसियतमा उनलाई स्वास्थ्य बिमा गराइदिएको थियो । २ हजार ५ सय नगद नपाएर स्वास्थ्य बिमा गर्न नसकेका उनलाई गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बिमा गरिदिएपछि ५० हजारको उपचार नि:शुल्क भयो ।
कालीबहादुर एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट लाभ लिनेको सूची लामो छ । यो कार्यक्रम विपन्नको जीवनमा ठूलो भरोसा बनेको छ । जिल्लामा जिल्ला अस्पताल, नेपालगन्जस्थित सरकारी अस्पतालदेखि काठमाडौंमा रहेका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा बापतको उपचार गराउने सर्वसाधारण धेरै छन् । जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएपछि स्वास्थ्य बिमा गराउने र त्यसमार्फत उपचार गराउनेहरू बढ्दै गएका छन् । दु:ख र अफ्ठ्यारोमा समेत सजिलै उपचार गराउन सकिने भएकाले स्वास्थ्य बिमाप्रति आकर्षण बढिरहेको छ ।
२०७४ चैत १ देखि जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको थियो । हरेक दिन स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरू बढेका छन् भने त्यसको अनुपातमा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गराउनेहरू पनि बढ्दै गएका छन् । जिल्लाभरका १० हजार ६ सय ९३ एकाइका ४२ हजार ६ सय ८४ जना स्वास्थ्य बिमित छन् । २२ हजार ६ सय ४ महिला र २० हजार ८० पुरुषले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । उनीहरूको पहिलो प्रिमियमबापत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा करिब २ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । स्वास्थ्य बिमा बनाउन २०७४ चैत १ देखि सुरु गरिए पनि उपचार भने त्यसको ३ महिनापछि २०७५ जेठ १ गतेदेखि मात्रै सुरु भएको थियो । जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू भएपछि जिल्लाभित्र मात्रै ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँको औषधि र उपचारमा खर्च भएको छ । जिल्ला अस्पताल, चौरजहारी अस्पताल र आठबीसकोट नगर अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमितको उपचार भइरहेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटजहारीमा पनि स्वास्थ्य बिमितको उपचार हुने भनिए पनि त्यहाँ उपचारमा जानेहरू निकै थोरै छन् । जिल्लाबाहिर गएर स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गराएका तथा औषधि लिएकाहरूको हिसाब पनि ठूलै हुने अनुमान गरिएको छ ।
२०७५ जेठ १ गतदेखि स्वास्थ्य बिमितको उपचार थालेको जिल्ला अस्पतालले हालसम्म ९ हजार ५ सय ७१ जनाको उपचार गरेको छ । जिल्ला अस्पतालबाट १ करोड मूल्य बरारको औषधि स्वास्थ्य बिमितले लिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. महेश चौलागाईंले बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भइसक्दा पनि जिल्ला अस्पतालमा सशुल्क फार्मेसी नहुँदा केही समय सर्वसाधारणले दु:ख पाएका थिए । पछि जिल्ला अस्पतालले आफै २४ घण्टा फार्मेसी, टिकट काउन्टर तथा ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
स्वास्थ्य बिमितले गुनासो गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन गरिएको थियो । हाल सकेसम्म स्वास्थ्य बिमितलाई अस्पतालमा भएको सबै सुविधा दिन प्रयास भइरहेको डा. चौलागाईंले बताए । चौरजहारी अस्पतालमा २०७५ जेठअघि नै स्वास्थ्य बिमाको उपचार सुरु भएको थियो । जाजरकोट जिल्लाका बिरामी पनि आउने भएकाले चौरजहारी अस्पतालले पहिल्यै उपचार थाले पनि रुकुमका बिरामी भने २०७५ जेठ १ देखि नै स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गर्न थालेको थियो । हालसम्म चौरजहारी अस्पतालले ५१ हजार बढीको उपचार गरेको छ । अस्पतालबाट झण्डै ५ करोड बढीको औषधि स्वास्थ्य बिमितले लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १५ हजार बढीले स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गराएको अस्पतालका प्रशासक डिलबहादुर गिरीले बताए । २०७५ असोज १२ गते उद्घाटन भएको आठबीसकोट नगर अस्पतालले पनि हालसम्म करिब ३ हजार स्वास्थ्य बिमितको उपचार गरिसकेको छ । ६३ लाख बढीको औषधि स्वास्थ्य बिमितले लिएका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १२:३७
हुम्ला–मुगु जोड्ने पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र
मंसिर २१, २०७६ राजबहादुर शाही
(मुगु) — मुगु र हुम्ला जोड्न कर्णाली नदीको भट्टेचौरमा निर्माण थालिएको बेलीब्रिज ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । मुगु–हुम्ला सडक सम्पन्न हुन लाग्दा पनि मुख्य पुलको काम पूरा नहुँदा सवारीसाधन आउजाउमा समस्या हुने देखिएको छ ।
साबिक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले आव ०७२/७३ मा ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । तर ठेकेदार कम्पनी पृथ्वी/आशिष जेभीले पुल निर्माणमा लामो समयदेखि आलटाल गर्दै आइरहेको छ । दुई जिल्लालाई सडक यातायातसँग जोड्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको बेलीब्रिजको निर्माण ठेकेदारले आयोजनास्थलमा कडा ढुंगाको समस्या देखाएर बीचमै छाडेका हुन् । ठेकेदारले काममा लापरवाही गरेपछि पूर्वाधार कार्यालयले पुलको डिजाइन स्टमेट परिर्वतन गरेको थियो । परिवर्तित डिजाइनअनुसार ९ करोड रुपैयाँ बजेट घटाएर ८ करोड रुपैयाँको लागत स्टिमेट तयार पारी सोही कम्पनीलाई काम गर्न कार्यादेश दिएको थियो ।
लागत रकम घटेको भन्दै ठेकेदारले पुल निर्माणमा लापरबाही गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा बालुवा, गिट्टी, फलामे छडलगायत निर्माण सामग्री आयोजनास्थलमा अलपत्र छन् । गमगढीदेखि बाम–चंखेली हुँदै हुम्लाको दार्मसम्मको सडक निर्माणको काम तीव्र बनाइएको छ । ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमका अनुसार ट्र्याक खोलिएको सडकमा कर्णालीबाट सवारीसाधन तारेर यातायात सेवा सञ्चालन गरिएको छ । सडक निर्माणपछि छिमेकी जिल्ला हुम्लाका बासिन्दालाई आउजाउ र खाद्यान्न आपूर्तिमा सहज हुने जनाइएको छ ।
संस्थाका अनुसार अहिलेसम्म ५६ किमि ट्र्याक खुलिसकेको छ । ठेकेदारले पुल निर्माणमा आलटाल गरेपछि पुलको डिजाइन परिर्वतन गर्न १६ महिना लागेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा सरकारी कार्यालयको संरचना परिवर्तन भएपछि ठेकेदारलाई थप फाइदा पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख मोहनसिंह कार्कीले बताए । विभिन्न कारणले कारणले ढिलासुस्ती भए पनि पुल निर्माणको काम छिट्टै सुरु गरिने कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज रावतले दाबी गरे । हिउँदमा कर्णाली नदीमा पानीको सतह घट्ने भएकाले काम गर्न केही सहज हुने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, निर्माणाधीन पुलको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेलगायतको टोलीले बिहीबार अनुगमन गरेको छ । एक साताभित्र काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्री शाहीले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘एक साताभित्रै पुलको काम सुरु नगरे ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिनेछ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १२:३२
मुगुमा सीमा क्षेत्रका विद्यालय खुले
सल्यानमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले एक वर्षदेखि तलब पाएनन्
खलंगामा पहिरो खसेको खस्यै
पढ्न पाउँदा मनै फुरुङ्ग
तुलाराम पाण्डे, राजबहादुर शाही
सल्यानका सिकाइ केन्द्र बन्द